Vanhu vanowanzo funga nezvemibvunzo iyi kana uchitenga sofa idzva reimba yako, manyorerwo acho anoyevedza, chii zvinhu zvinogara kwenguva refu, dehwe kana jira pasofa ndeipi iri nani? Chaizvoizvo, pane zvakawanda zvinhu zvekutarisa kana bhajeti, nyaradzo, chimiro, nezvimwewo shure kwezvose ndechimwe chezvikamu zvakakosha zvehupenyu hwako. In terms of the leather vs…
Mubhedha sebasa rakakosha remidziyo yemumba inokosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Mubhedha wakasununguka uye wakapfava unotarisa mhando yekurara kwako. Kana mubhedha unonetsa kurara uye kuzorora, zvinoita kuti unzwe kuneta zuva rinotevera iro rinonyanya kukanganisa chimiro chebasa remumwe. Kune mhando dzakasiyana dzemubhedha ...
Nhanganyaya chigaro chemagetsi chejecha chine mabhatani akasiyana. Iwo kumusoro uye ezasi mabhatani pane bhatani anogona kudzora kumusoro nekudzika kweshure kwesofa. Nekugadziriswa kwesofa remagetsi, chinzvimbo chemunhu pamutsago chinoshandukawo, seye kumashure. Dzimwe nguva, vanhu vanofambisa chiuno kumashure, uye zvakaipa…
Pane mitemo mishanu yekugadzirisa mateti. Ndinovimba zvinokubatsira kutenga nguva shoma yekupinda muhusiku hwakanaka pane kunetswa neguruva, utachiona, nezvimwe RONGA 1: Mhepo matairesi ako zuva rega rega Husiku hwese, isu tese tinorasikirwa nehafu hafu yepindi yemvura isu takarara, which creates an appealing environment for dust mites and can lead…